APPLE "SUN": SHARAXAAD KA MID AH NOOCYADA KALA DUWAN IYO BEERISTA AGROTECHNIK - GEED GEEDEEDKA
Tufaaxa xilliga dayrta ee "Sun" ayaa ay jecel yihiin beeralayda guryaha sababtoo ah dhadhankiisa sare iyo tayada ilaalinta wanaagsan.
Bisaylkiisa, waxay kooxo guduudan u qurxinayaan taajka iswada leh ee geed yar. Intaa waxaa dheer, kala duwan tani waxaa lagu kala soocay fududaynta beerashada beeraha.
Maqaalkani waxa aanu sharxi doonaa sida loo koro geed "Apple" oo ku yaala goobtaada, iyo sidoo kale falanqaynta faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan.
Ma taqaanaa? Muujintii hore ee Giriigta, tufaaxa ayaa lagu caabuday sidii calaamad u ah diirimaadka qorraxda iyo xigmadda, isagoo ku adkeynaya awoodda aan caadiga ahayn geedaha taas oo miraha ay koraan. Dhirta Apple waxaa loo tixgeliyaa hadiyadaha quduuska ah ee cibaadada loo yaqaan "Apollo". Marka la eego, magaciisu waa hal-xidid ereyga Ingiriisiga "tufaax".
Taariikhda noocyada xulashada tufaaxa "Sun"
Dhirta tufaaxa ee "Sun" waxay ku dhasheen shaqaale taxane ah oo ka shaqeeya Machadka Cilmi-baarista ee cilmi-baarista ee All-Russian Vladimir Zhdanov iyo Zoya Serova horraantii 80aad. Kala duwan ayaa laga soo saaray miraha geedaha tufaaxa ee si xor ah loo gooyey, kadibna lix sano kadib wuxuu la yaabay qof kasta oo leh dhalid aad u sarreeya.
Xataa xayawaanka ma filaynin geed geedkaas oo kale ah. Dhirta tufaaxa ee dhallinyaradu waxay ka muuqdaan noocyo dhaqameed caan ah. Tusaale ahaan, labalaabay waxqabadka "caanka ah Antonovka." Qodobka qiimaha macmiilku wuxuu ahaa dhadhanka kala duwan ee noocyada cusub. Dhowr geedka tufaaxa "Sunny" waxa uu noqday mid la jecelyahay beerta oo dhan. Marka la eego baahida iyo dhacdooyinka baahsan ee wakiilada cusub ee miro, saynisyahannadu waxay leeyihiin gobollo kala duwan.
Astaamaha noocyo tufaax ah "Sun"
Astaamaha ugu muhiimsan ee geedka tufaaxa "Bacda" waxay ugu yeeraan caabbinta sare ee barafka, fudaydka daryeelka, qurxinta, fruiting oo badan iyo dhadhan fiican ee midhaha. Aan ka fekerno faahfaahin dheeraad ah kala duwanaanta kala duwanaanta dadka kale.
Dhirta dhirtu way yar yahiin, waxay leeyihiin korriin taajir ah oo cufan dhexdhexaad ah. Laamood ee iskudhafka iyo garbaha ku daboolan leh jilif midab ah oo midabkiisu yahay midab khafiif ah oo leh midab yar. Caleemaha dhalinyarada waxaa lagu gartaa dhumuc, dhirbaaxo iyo internode gaaban, iyo sidoo kale burooyin qoyan oo la isku qurxiyo. Caleemaha waa weyn, ukumo-qaabeeya leh caarada fiiqan. Muuqaaladu waa kuwo gaaban oo qaro weyn leh.
Marka geedo tufaax ah ubaxu, jawi cajiib ah ayaa la abuuraa sababtoo ah ubaxyada casaanka ah ee casaanka jilicsan si weyn u daboolaya laan hoosaadka. Waxay badanaa ka kooban yihiin 5-6 burooyinkoodii. Inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa ee tufaaxa, laamaha culeyska miisaankoodu hoos ayay u dhacaan, markaa waa muhiim in la hubiyo in aysan jebin.
Ma taqaanaa? Midhaha geedaha tufaaxa ee noocyada kala duwan ee "Sun" waxay ka kooban yihiin sonkor (qiyaastii 8% hal tufaax), ascorbic acid (7 mg halkii 100 g), acids oo lagu dulqoro (1%), xayndaabyada P-firfircoon (100 mg).
Midhaha geedka tufaaxa "Sun", sida kor ku xusan ee sharaxaadda, koraan si weyn. Mid kasta oo tufaaxu wuxuu miisaankiisu ka jiraa 200 g, marka laga reebo, waxay yihiin dhuuban, si tartiib ah u foorarsadaan, ballaadhan, oo ku daboolan maqaarka iftiinka huruudka ah, oo si guul leh u cagajugleeyaa cadarka cirridka leh. Maqaarka ku yaal maqaarku waa muuqaal cad oo yaryar oo yaryar oo caddaan ah.
By waqtiga goosashada, ku dhowaad dhammaan miraha ku shubay, taas oo ka dhigaysa xitaa more appetizing. Jirka waa caddaan, marmarna creamy. Dareerida qoyaanka iyo dhadhanka macaan. Abuurku waa yar yahay, u eg yahay qaabka caleemaha. Miro ayaa lagu dhajiyaa laanteeda oo leh qaab gaaban oo toosan.
Dhirta Apple ee kala duwan tani waxay leedahay faa'iidooyin badan, kuwaas oo ka mid ah bannaanka u ah ee dib u eegis ku dheh:
adkaanta jiilaalka (geedaha u adkeysanaya xitaa 40 digrii).
gaadiidka qoriga iyo dabaysha;
tafaariiqda tufaaxa (waa la cuni karaa cayriin iyo shaqeyn);
Awoodda petioles si ay u qaataan xididada rootstocks.
Ka mid ah cilladaha macaamiisha kala duwan ee "Sun" kala xiriir:
fruiting wuxuu ku bilaabmaa da'da shan ilaa toddoba sano;
muddo dheer ka hor goosashada, miraha waxay bilaabaan inay dhacaan, iyaga oo ku khasbaya in ay ka shaqeeyaan juice.
Ma taqaanaa? Muuqaalka tufaaxa "Sun" ayaa sabab u ahaa noocyada kala duwan ee lagu daray liiska dhirta tufaaxa ah.
Xeerarka abuuritaanka tufaaxa "Sun" ee goobta
Geedka tufaaxa ee "Sun" wax dhibaato ah ma keeno doorashada goobta, ama iyadoo la siinayo shuruudo dheeraad ah oo geedo ah. Geedaha si fiican ayuu u qaataa oo uma baahna daryeel gaar ah. Hase yeeshee, waxaa habboon in la fiiriyo dareenka qaar ka mid ah awrotechnology awood leh.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo geedo
Beerta noocyo kala duwan, sida tufaax kale, ayaa la qorsheyn karaa guga ama dayrta. Haddii aad tan sameyso badhtamaha bisha, geedka wuxuu yeelanayaa waqti ka hor bilawga cimilada qaboobaha si loo xoojiyo nidaamka asaasiga ah oo aanu ku engegi doonin sababtoo ah hawada qoyan, cimilada qoyan.
Laakiin bilowga Abriil ee fidida waxaa loo tixgeliyaa waxtar badan. Khabiiradu waxay sharraxayaan jagadan iyadoo xaqiiqda ah in geedku uu leeyahay wakhti dheeraad ah si uu u noqdo mid xoog badan oo la qabsado jiilaalka. Xaaladaha beerto guurka, waxaa muhiim ah in lagu dhajiyo jirridda geedka waqtigeeda, iyada oo xididdada ka ilaaliya abaarta.
Taariikhda degitaanka waxay ku xiran tahay heerkulka cimilada ee gobol gaar ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in dhulka uu si fiican u kululaado, laakiin weli ma uusan engegin qorraxda kulaylka. Ka hor inta beerto geed geed ah, si deeqsinimo ah u qoyso xididada. Sidaa awgeed, seedling ayaa ka tagay maalin uun biyaha. Oo markaad beerto, geed baa loo waraabiyaa sida cawska oo kale, oo dhulkuna mijo ku soo dego.
Noocyada iska caabinta "Sun" ee qabow waxay sahlaysaa raadinta meel wanaagsan oo geedkan ku yaal. Laakiin weli, dhalidda dhirta tufaaxu waxay noqon doontaa mid aad u weyn haddii ay ku taallo dhinaca koonfureed, koonfur-bari ama koonfur-galbeed. Intaa waxaa dheer, dabeecadda kuleylka leh ee noocyada kala duwan waa in la tixgeliyaa: wakiilladiisu waxay ku raaxeysanayaan aagagga ciriiriga ah oo biyaha dhulku ku qulqulaan qoto dheer oo ka badan 2 m.
Xulashada carrada lama siin karo muhiima gaar ah, sababtoo ah "Sun" waxay ku habboontahay xaalad kasta, marka laga reebo dhoobada iyo substrates culus. Haddii aysan jirin wax beddel ah, waxaad ku qasbanaan doontaa inaad ku darto ciid badan oo ceelka ah si loo beero abuurka. Sidaa darteed, waxaad ka caawin doontaa ciidda in ay noqoto mid aad u jilicsan oo u dhaafaysa oksijiinka nidaamka asaasiga ah, taas oo gacan ka geysan doonta horumarinteeda buuxda mana ogolaan doonto in la joojiyo biyaha.
Waa muhiim! Weligaa ha isticmaalin sida balka boodhka ah ee loogu talagalay mulching wareegyada pristvolny ee geedaha tufaaxa - waxay oxidize ciidda.
Diyaargarowga beeritaanka geedka tufaaxa, oo ay tahay inaad bilowdo 3-4 asbuuc, waxaad u baahan tahay inaad qodo daloolka 70 cm oo qoto dheer iyo 1 m ballac ah. Ku darso waxyaabaha ku jira shoolada koowaad hal god, oo ka bilaabma 30 cm qoto dheer, samee mid labaad. Tani waa lagama maarmaan si ay u sii daadiyaan seedling leh ciidda bacrin ah, laga saaray lakabka sare. Ku wad 5cm si weyn u gali qaybta jeexitaanka, hoos u daadi xagga hoose.
Dhirta Apple ma jecesho qoyaan taagan, kuwaas oo gacan ka geysan kara suuska xididka. Ka dibna isku dhaji substrate ka soocka ugu horeeya ee qaybo siman oo leh humus, peat iyo compost (qadar laba ah oo ciid ah ayaa lagu daraa dhoobada). Buuxi godadka leh isku darka diyaarinta, waa suurtogal in la koro - kiiskan, geedka tufaaxa, marka dhulku degayo, ma noqon doono hunqaaco, halkaasoo qoyaanku si joogto ah u soo ururin doono. Ka dib markii wax laga qabanayo filimka oo dhan.
Ka dib markii muddo cayiman, marka geedo yihiin la soo iibsaday, xididdadiisa ayaa lagu qooyay iyo lagu daaweeyay mash a dhoobo gaar ah, waxaad bilaabi kartaa beerto. Marka hore fiiri xididada waxyeelo, kallanaato iyo qalajinta. Haddii aad ku qanacsan tahay, dhirta ku rid dalool, adoo si fiican u dhajiya nidaamka xididada oo si aad u badan u biyo badan. Marka dhulku uusan mar dambe nuugin, qoyaanku wuxuu bilaabmaa inuu buuxiyo fasaxyada dhulka, markaad ruxayso godka si uu u buuxiyo godadka aasaasiga ah ee xididdada.
Goobta ciriiriga, haddii kale geedku ma qaadan doono xidid, oo hubi in xididka xididka uu yahay 5 cm ka sareeya dhulka. Ugu dambeyntii, xir xididka qallaylka iyo xoqin asliga ah dhirta tufaaxa 10 cm si aan geedku u qaadin marka cudurka mulch la gooyey .
Talooyin ku saabsan daryeelidda "apple"
Apple "Sun" uma baahna aqoon gaar ah inta lagu jiro beerashada iyo daryeelka. Geedka loo beeray waa in isla markiiba la gooyaa, ka saara dushooda jirridda iyo lafaha qalfoofka 80 cm dhulka. Mustaqbalka, tufaaxan wuxuu sameyn doonaa taajka saxda ah iyo nidaam xidid awood leh. Isla muddadaas, waxaad ku isticmaali kartaa quudinta ugu horeysa ee warshadda - waxay ku caawin doontaa inuu si dhakhso ah u qaato. Biyaha, nidaaminta, bacriminta iyo tallaabooyinka ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada ayaa muhiim u ah noocyada kala duwan.
Waa muhiim! Sidaas darteed in xilliga qaboobaha, jiirka joonisku ma xanaaqo geedahaaga midhaha, ka ilaali jilifkooda xaashi nus-mitir ah oo saqaf ah ama foorno cufan cufan. Haddii kale, laamiyo ku habboon oo loo yaqaan 'conifers'.
Inkasta oo geedka tufaaxa "Sun" oo loo tixgelinayo geedka aan waxtarka lahayn, laakiin khaladaadka sii kordhaya wuxuu horseedi karaa dhimashadiisa. Inta badan tani waa sababta oo ah geedka tufaaxa ah waxaa soo weeraray xayrta budada ah, cytosporosis, iyo cayayaanka waxyeellada leh.
Cudurada waxaa lagu muujiyaa mugdiga mugdiga ah ee jilif, caleemo iyo, markay horumarayaan, waxay dilaan dhaqanka. Bloom cad cad ayaa inta badan u muuqda boodh oo aan si dhab ah loo qaadin. Iska ilaali caleemaha - waa inay noqdaan kuwo miro dhal ah, leh midab cagaaran. Ka qayb qaadashada cudurka boogaha ee cudurku wuxuu noqon karaa dhul xun, maqnaanshaha walxaha macdanta ah waa in la yimaadaa Bacriminta, la'aanta ama xad-dhaafka qoyaanka ee ciidda. Tallaabooyinka ka hortagga waa in la sameeyaa guga kasta. Horumarka ugu horreeya ee geedaha tufaaxa waxaa la fuliyaa Maarso leh sulfate copper ama "Skor". Midda labaad waa marka uu geedka ka baxo isticmaalka oxychloride copper. Ka dib markii miraha oo dhan laga saaro, ku qaataan nadiifinta ugu dambeysay ee naxaas sulfate. Hababka dhaqameed waxaa lagula talinayaa ujeedooyinkan si ay u isticmaalaan xalalka saabuunta, basbaaska dhulka ah, iniin khardal ah.
Daaweynta caafimaadka ayaa isla markiiba la sameeyaa ka dib marka calaamadaha cudurka la ogaado. Daaweynta jeermiska ee "daroogada", "Topaz", "Topaz", kaniiniga colloidal, xalalka loo diyaariyey sida waafaqsan tilmaamaha.
Daryeelka tayo sarre ee tufaaxa "Sun" wuxuu bixiyaa nadiifinta wakhtiga cagaaran ee wareegyada pristvolnyh iyo caleemaha dhacday, sababtoo ah waxay yihiin deegaan wanaagsan oo loogu talagalay dulin, oo dhakhso u bilaabaan in ay geedka gooyaan. Waa suuragal in mudo ah xilliyada dabiiciga ah ee dhulka lagu daboolo maskaxda, ka hortagga abuurista qolof adag, taas oo abuuri doonta caqabad ku ah helitaanka ogsijiinka xididdada.
Waa muhiim! 4-5 sano ee hore, geedo badanaa la waraabiyo, laakiin qaybo yar oo biyo ah.
Waxaad u waraabin kartaa geedaha tufaaxa siyaabo kala duwan. Si ay u fududeeyaan shaqadooda, waxaad qalabayn kartaa rusheynta, faleebo ama waraabka dusha sare. Mid kastaaba wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa. Laakiin kiis kasta, ha iloobin in kuleylka qadar yar oo biyo ah uu waxyeeleynayo geedka. Waxaa jira mamnuucidda dhogorta tufaax ka hor iyo ka dib markaad midho soo qaadato. Jaahwareerka shucuuradani waxay u horseedi doontaa koritaanka caleemaha dhalinyarada ah ee aan kor marin karin waxayna si xun u saameeyn karaan geedka.
Iyadoo ku xiran da'da geedaha tufaaxa, qiyaasta biyaha ee waraabka ayaa la xisaabiyaa. Tusaale ahaan, miro sanadka ugu horreeya ee nolosha waxay u baahan yihiin laba baaldi halkii mitir oo mitir oo wareeg ah oo wareega goobada gudaheeda, sanadka labaad, heerkaan wuxuu kordhiyaa afar baaldiyo. Sida waafaqsan, geedo ka weyn shan sano jir oo bilaabay inuu midho dhalo waxay u baahan yihiin lix baaldi ama kabadan.
Guga, geedo tufaaxa dhallinyarada ah (ilaa shan sano jir) ayaa la waraabiyaa markii ugu horeysay ka hor inta aanaan bilaabin inay ubaxdo, ku celinta qalliinka todoba cisho oo kasta. Wixii geedaha qaangaarka ah, waraabinta labaad ayaa la qaadaa inta lagu jiro sameynta ugxansidaha.
In kuleylka u baahan yahay qoyaan dheeraad ah. Nidaamka ugu dambeeya waxaa la abaabulaa dhowr toddobaad ka hor inta aan midhaha laga saarin geedkii. Haddii bisha Oktoobar lagu garto cimilada diiran oo qallalan, waa lagama maarmaan in xilliga afraad si ay u qoyaan ciidda leh ujeedo ka hortag ah, sidaa darteed geedkii tufaaxa ma qalajiyo oo aan barafoobin inta lagu jiro jiilaalka.
Waa muhiim! Si aad uga hortagiso qolofta qallalan ee qalalan ka dib markaad waraabiyo wareegyada geedaha, buuxi godka leh mulch - Waxay ka qayb qaadataa qoyaanka.
Qudaarta quudinta ayaa lagu go'aamiyaa wejiyada dhirta. Geedku wuxuu u baahan yahay nafaqooyin marka caleemaha ay bilaabaan in ay horumaraan, sidaa daraadeed bacrimin-ku-jira Bacriminta iyo organics waxay ku habboon yihiin kordhinta biomass. Badanaa xilliga gu'ga waxay sameeyaan isku dar ah nitroammofoski iyo amooniyam amase amase xal xalinta digaaga.
Haddii keliya doorashada ugu dambeysa la isticmaalo, hababka waa in lagu celiyaa bil kasta laga bilaabo Maarso ilaa Juun. Inta lagu jiro xilliga jimcaha, dhirta waxaa lagu daray qudaar, superfosphate, chloride potassium, iyo nitroammophoska. Si miro loogu diyaariyo si fiican jiilaalka, bisha Agoosto waxaa lagu bacrimiyaa dhismooyinka macdanta, kaas oo ah in lagu qoro "dayrta" oo ku saleysan waajib.
Daboolka sare waxaa lagu daboolayaa qaybo yar oo mitir ah oo lagu sameeyo wareegyada wareegga ama ceelasha dhuumaha.
Ka hor inta aadan dhajin geedka tufaaxa, si cad u sheeg nafsadaada waxa aad tirtiri doonto. Waa in la fahamsan yahay in wax kasta oo gooyo geedo ay ka hadlaan ka takhalusidda qaybaha buka, kuwa jiran iyo kuwa dhintay, iyo sidoo kale geedaha waxyeelloobay. Tan waxaa loo sameeyaa sameynta taajka iyo horumarka caafimaad ee dhaqanka, iyo marka laga reebo in laga fogaado cudurka. Nidaamka tufaaxa gooyey "Sun" waa wax aan ka duwaneyn dhirta kale ee noocyada. Bishii Maarso, oo ah geedo yar yar waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dhumucda laanta, iyo sheymaha baaluqa - qaybaha hore iyo kuwa la qaboojiyey. Xilliga dayrta ee bilawga ah cimilada qaboobaha, sprouts oo daciif ah oo aan awood u lahayn hibernation. Waxaa intaa dheer, way ka fiicantahay in la fuliyo qalliinka noocan oo kale ah marka suufku istaago geedaha.
Qaybaha soo-baxa ee qiyaasta weyn waxaa lagu daaweeyaa garoonka beerta. Si aad u bilowdo in aad bilowdid engejinta qashinka.
Ma taqaanaa? Fikradaha waayeelka ah ayaa waxay soo saareen halyeeyga afartan tufaax, sida ay doonayaan inay soo baxaan runta haddii lagu afduubo afartan mirood, oo marka hore la afuufayo.
Hardiness Winter - Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan. Bixinta aad u habeysey waraabinta saxda ah iyo quudinta iyada, geedka tufaaxu wuxuu ilaalin doonaa jiilaalka nabdoon iyo dhawaaqa. Dhirta da'yarta ah ee koraaya in ka yar shan sano waxay u baahan yihiin caawimo, maadaama guryahoodii u adkaysta ay weli u baahan yihiin shabakad nabadgelyo leh. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanaayo mulch on wareegyada pristvolnyh. Sidoo kale iska caabin ah qabow waxaa kicin kara daaweynta foliar ee dhirta leh superfosphate (30 g halkii 1 l oo biyo ah).
Haddii aad si haboon u abaabulayso noocyada tufaaxa ee "Sun", laga bilaabo hal hektar oo beerto ah ayaa laga soo ururin karaa ilaa 100 sentar miro. Geedaha waxaa lagu gartaa fruiting xasilloon iyo deeqsinimo leh. Milkiilayaasha waayo-aragnimada ah waxay barteen in ay xakameeyaan culeyska tufaaxa, iyaga oo ka jaraya qaar ka mid ah, tusaale ahaan, si loo farsameeyo.
Bisaylkiisa ah kuwan miraha macaan oo macaan leh ayaa dhacaya dhammaadka Sebtembar. Tixgeli in ay la cuni karo hal bil kaliya. Beergooyinku waa inay ahaadaan kuwo taxadar leh, cayayaanka oo laga digtoono iyo hoos u dhaca miraha deriska ah.
In beerta loogu talagalay pollination wanaagsan iyo, si waafaqsan, fruiting waa in lagu beeray noocyo kala duwan ee tufaax, tusaale ahaan - Zhigulevskoe, Sineer Northern, pear Moscow, Sinap Orlovsky, Medunitsa, Bely ku shubaya, Hoofka Silver, Candy, Orlik, Uslada, Streyfling, Mechta, Gloucester , Melba, Welsey, Mantet.
Xilliga jiilaalka, tufaaxa qarsoon ee Maqsin, ku rid alwaax ama sanduuqyada kartoon lagu karkariyey leh Kansar dhalaanka. Miro kasta waxaa lagu duuduubay warqad waxaana si taxaddar leh loogu diyaariyey kaydinta xiga.
Milkiilayaasha qaar waxay tirtiraan tufaaxa qamriga ama manganese xal loogu talagalay jeermiska. Ha ilaabin in miraha aysan ku jiri karin isku mid ah baradho. Tani waxay sabab u tahay maaddooyinka qarsoodiga ah ee sababa labadaba. Kaydinta waxaa muhiim ah in la ilaaliyo caadooyinka qoyaanka iyo heerkulka.